Moments Neshamwari 9
Shamwari yakabva kuCentral States yakabvunza: Zvakaipa here kushandisa pfungwa pane nzira dzekuporesa kurwara kwepanyama?
Mubvunzo unovhara munda wakakura kwazvo kuti upindure zvisina mhinduro "hongu" kana "kwete." Pane zviitiko apo munhu anoruramisa mukushandisa simba rekufunga kukurira zvakaipa mumuviri, mune izvo zvatingati izvo zvaive zvisiri izvo. Muhuwandu hwakawanda hwezviitiko zvakasarudzika zvisizvo kushandisa pfungwa pachinzvimbo chechisimba nzira dzekurapa nadzo zvakaipa mumuviri. Zvino tinga sarudza sei kuti ndedzipi nhanho dzakarurama uye ndedzipi dzakaipa? Izvi zvinogona kungoonekwa zvichienderana neshoko rinobatanidzwa. Kana isu tikanzwa tine chokwadi nezve musimboti nzira dzakashandiswa dzinoenderana nahwo saka ndizvozvo. Kuti kuti mubvunzo upindurwe nenzira yakajairika uye kwete nenyaya yakati, kuti kana nhungamiro ikaonekwa munhu wacho anozogona kuishandisa kune chero nyaya uye kuona kana chiri chakanaka kana chakaipa kurapa zvakaipa panyama ne. maitiro epfungwa. Ngatitsvagei iwo musimboti uyu: Zvirwere zvemuviri ndezvechokwadi here, kana kuti ndedzokunyepedzera? Kana chirwere chemuviri chiri chokwadi chinofanirwa kuve mhedzisiro yezvakakonzera. Kana izvo zvinonzi zvikonzero zvemuviri zvekunyepedzera hazvisi zvakaipa zvemuviri zvachose, iko kunyepedzera. Kana kufungidzira kuchinzi chirwere chepfungwa uye kuti icho chiri kurwara mupfungwa uye kwete mumuviri wenyama saka kunyepedzera hakusi kurwara chaiko, kupenga. Asi isu hatigoni ikozvino kubata nekupenga; tine hanya nehurombo hwomuviri. Tichibvumidza ipapo kuti zvinokuvadza zvemukati ichokwadi, isu tinoti chokwadi ichi mhedzisiro. Nhanho inotevera ndeye kutsvaga zvinokonzeresa izvi zvinokuvadza. Kana tikakwanisa kuwana chikonzero chehurwere hwepanyama isu tinokwanisa kurapa chirwere chepanyama nekubvisa chikonzero chayo uye nekubatsira hunhu kugadzirisa hurema. Kurwara kwemuviri kunogona kunge kuri iko kunokonzerwa nezvikonzero zvemuviri kana zvezvikonzero zvepfungwa. Zvirwere zvemuviri izvo zvinokonzerwa nenzira yemuviri zvinofanirwa kurapwa nenzira dzemuviri. Izvo zvakaipa zvemuviri zvine chikonzero chepfungwa, zvinofanirwa kunge zvine chikonzero chepfungwa chevanorwara chakabviswa saka hunhu hunofanirwa kubvumidzwa kumisazve kuwirirana kwemuviri. Kana izvo zvataurwa zvichava zvechokwadi, tinogona ikozvino kutaura kuti chero chirwere chemuviri chine chikonzero chemuviri hachifanirwe kurapwa nepfungwa, uye kuti chero chirwere chiri mumuviri chinokonzerwa nechirwere chepfungwa chinofanirwa kunge chine zvikonzero chakabviswa uye hunhu huchagadzirisa hurwere hwepanyama. Iro dambudziko rinotevera kubviswa kuitira kuti tizive nzira yedu ndeyekufunga kuti ndezvipi zvakaipa zvinokonzerwa nemuviri, uye zvipi zvinorwara mumuviri zvine zvikonzero zvepfungwa. Kukuvara, maronda, mapfupa akatyoka, sprains nezvimwewo, zvinokonzerwa nekubata zvakananga nenyaya yepanyama uye unofanirwa kugashirwa kurapwa. Zvirwere zvakadai sokunwa, chirwere cheshuga, gout, locomotor ataxia, pneumonia, dyspepsia uye Brights 'chirwere, zvinokonzerwa nechikafu chisina kukodzera uye kuregeredza muviri. Izvi zvinofanirwa kurapwa nekuchengetwa kwakakodzera kwemuviri uye nekuchipa chikafu chine hutano, icho chinobvisa chikonzero chechirwere chepanyama uye nekupa zvakasikwa mukana wekudzosera muviri mune yavo hutano hutano. Zvirwere zvemuviri izvo zviri mhedzisiro yezvakakonzerwa nepfungwa, senge kutya, uye hosha dzinounzwa nekushandiswa kwezvinodhaka, zvinodhaka nedoro, uye hosha dzinokonzerwa nepfungwa dzekusazvibata uye zviito, dzinofanirwa kurapwa nekubvisa chikonzero chechirwere, uye kubatsira masikirwo kudzoreredza kuyenzana kwemuviri nechikafu chakanaka, mvura yakachena, mweya mutsva uye zuva.
Zvakanaka here kuedza kurapa zvirwere zvepanyama nokurapwa mupfungwa?
Aihwa! Hazvina kunaka kuedza kurapa hutano hweumwe ne "kurapwa kwepfungwa," nekuti mumwe anokuvadza nekusingaperi pane zvakanaka. Asi mumwe ane kodzero yekuedza kurapa chero dambudziko rechisimba rake uye kuedza kunogona kusangana nemubatsiro zvinobatsira kupa iye asingayedze kuzviita kuti atende kuti haana kurwara.
Kana zvakakosha kuporesa zvirwere zvenyama nemaitiro ekufunga, kugovera zvirwere zvepanyama zvinotangira pfungwa, nei zvakashata kune nyanzvi yepfungwa kana muKristu kuporesa zvirwere izvi nekurapwa kwepfungwa?
Izvo zvakaipa nekuti maKristu uye masayendisiti epfungwa haazive pfungwa kana iyo mirawu inotonga nekudzora kuita kwepfungwa; Nekuti mune zhinji dzenyaya iyo sainzi yepfungwa, asingazive chikonzero chepfungwa chekurwara kwepanyama, uye kazhinji achiramba kuvapo kweanorwara, anoedza kurapa nekuraira kwepfungwa dzemurwere wake kana nekupangidzira pfungwa dzeavo kushivirira kuti iye mukuru kune vanorwara kana kuti chirwere chinongova kunyengera; saka, asingazive chikonzero kana mhedzisiro yake yepfungwa pamurwere wake maererano neanorwara, kunyanya kana anorwara achiregeredzwa kana kutariswa sekunyepedzera, haana mhosva pakurapwa. Zvekare, kana chinangwa chake chaive chaicho mukuyedza kurapwa kwemurwere uye mhedzisiro yacho yaiita seinobatsira, zvakadaro kurapwa kwakadaro kungave kwakaipa kana musayendisiti wepfungwa akabvuma kana kutumira mari kurapwa.
Sei zvakashata kuti masayendisiti epfungwa agamuchire mari yekurapa kwepanyama kana yepfungwa panguva apo vanachiremba vanobhadhara mari yavo yenguva dzose?
Zvingave zviri nane zvikuru dai Hurumende yakabhadhara kana kuchengeta varapi kuvanhu, asi nekuda kweizvozvo hazvisi izvo chiremba anoruramiswa pakubvunza mari dzezvikwereti. nekuti, pekutanga haaite zvekunyepedzera masimba emashiripiti nemaitiro epfungwa, nepo iye achicherekedza hutano hwepanyama kuve chokwadi, uye achibata nenzira yemuviri, uye achivabata nenzira yemuviri ane kodzero yekubhadharwa kwemuviri hazvina kudaro kana ari wepfungwa kana imwezve musayendisiti, nekuti anoti anorapa kuburikidza nepfungwa, uye mari haifanire kuve nehanya nepfungwa pakurapa kwechirwere, semari inoshandiswa uye yakaiswa pazvinhu zvepanyama. Naizvozvo, kana, icho chirwere chemuviri chakanzi kunyengera, angadai asina kodzero yekutora mari yemuviri kurapwa kweicho chisipo; asi kana akabvuma anorwara uye akarapa nemaitiro epfungwa angadai asina kodzero yekugamuchira mari nekuti mubairo wakawanikwa unofanirwa kunge uri werubatsiro, kana rubatso rwuri kubva mundangariro mubairo chete unofanirwa kuve iwo kugutsikana kwekuziva kuti kubatsirwa kwakange kwapihwa. Kubatsirwa kunowanikwa kunofanirwa kugamuchirwa mundege imwechete umo kubatsirwa kunopihwa uye zvinopesana.
Sei zvisina kunaka kuti musayendisiti wepfungwa agamuchire mari yekurapa zvirwere paanozvipira nguva yake yose kubasa iri uye anofanira kuva nemari yekurarama?
Nekuti iye anogashira mari haakwanise kudzosera hutano hwakakwana kune anorwara nepfungwa apo iye angave ari-wepfungwa wepfungwa akasvibiswa nekufunga kwemari. Mumwe aisazoshandisa murume anoparara, asina kusimba uye ane unzenza kudzidzisa nekuvandudza hunhu hwake kana hwevana vake; uye hakuchina mumwe munhu anofanira kushandisa sahwira kana muKristu musayendisiti kuti amurape iye kana shamwari kana "sainzi" pfungwa dzikabatwa naye uye achirwara neiyo hutachiona hwemari. Izvo zvakakwana kuti utaure kuti muporesi wepfungwa anoporesa nekuda kwekuda kurapa uye kubatsira vamwe vanhu. Kana ichi chiri chokwadi, uye mubvunzo wemari usinga pinde mupfungwa dzake iye achamukira pakufunga kwekugamuchira mari; nekuti kufunga kwemari uye kudiwa kweumwe hazvisi mundege imwechete uye hazvifadzi muhunhu hwavo. Naizvozvo, kana mari ikanzi mubhadharo wemubhadharo watambirwa, murapi anozviramba kana achinge aporesa chete kubva parudo rwemumwe wake. Uku ndiko kuedzwa kwechokwadi kwekuporesa. Asi zvinobvunzwa kuti anogona sei kushandisa nguva yake yese kubasa rake uye kurarama asingagashiri mari? Mhinduro yacho iri nyore kwazvo: Hunhu huchapa vese vanomuda zvechokwadi uye vanoshandisa hupenyu hwavo kuti vamubatsire pabasa rake, asi vanoedzwa nemiedzo yakawanda vasati vagamuchirwa uye nekupihwa. Chimwe chezvinodikanwa izvo zvisikwa zvinodikanwa semurukota wake uye chiremba ndechekuti ave nekuve nepfungwa dzakachena, kana kuti pfungwa dzake dzichasununguka kubva murudo rwekuzviwanira iye. Tichifunga kuti iye angave-anoporesa ane sarudzo yemusango yezvido zvevanhu uye anoshuva kubatsira nekurapa kwepfungwa. Kana aine chero kugona kwepanyama uye achisangana chero budiriro, varwere vake nemasikirwo vanoshuva kuratidza kuonga kwavo, uye kumupa mari, kunyangwe iye asina kudaira. Kana akadaidzira kana akazvigamuchira izvi pakarepo zvinoratidza kuti haazi iye anosikwa nemasikirwo; kana pakutanga aramba zvisikwa zvinomuedza zvakare, uye ndokuona kuti ari kuda mari, uye paakakurudzirwa kuitora zvichikosha zvinowanzoita kunge zvichimumanikidza kudaro; uye kubvuma kwemari kunyangwe zvakanaka chinangwa chake kungave, inzira yekutanga yekupinza pfungwa dzake nemubhadharo wemari-sekuratidza kuti ndozvazvakaita nevarapi vanobudirira. Iyo microbe yemari inokanganisa pfungwa dzake, uye chirwere chemari chinokura pamwe nekubudirira kwake, uye kunyangwe angaratidzika kunge achibatsira varwere vake mune chimwe chikamu chechimiro chavo achavakuvadza mune imwe chikamu nekuti, kunyangwe nekusaziva, akaita hupombwe uye anorwara nepfungwa uye haakwanise kutadza kuporesa varwere vake nezvirwere zvake. Zvinogona kutora nguva yakareba, asi hutachiona hwechirwere chake huchadzika midzi mupfungwa dzevarwere vake, uye chirwere ichi chinobuda mumativi asina kusimba ezvibodzwa zvavo. Zvekuti hazvina kunaka kuti munhu angarapa zvachose marapiro kuti agamuchire mari, nekuti haakwanise kurapa zvachose kana akagamuchira mari, zvisinei hazvo mhedzisiro inowoneka pamusoro pezvinhu. Kune rimwe divi, kana chishuwo chake chiri chega kubatsira vamwe panzvimbo pekuita mari nekuporesa saka zvisikwa zvichamupa.
Ko zvisikwa zvinogona sei kupa munhu anoda chaizvo kubatsira vamwe, asi ndiani asina nzira yekuzvitsigira pachake?
Mukuti izvo zvakasikwa zvichapa isu hazvireve kuti anogeza mari muhomwe yake kana kuti masimba asingaonekwe anomuporesa kana shiri dzichamudya. Kune rumwe rutivi rwusingaoneki rwechisikirwo, uye kune iro rutivi rwunoonekwa. Chisiko chinoita basa raro chaicho padivi risingaoneki rezita rake, asi mhedzisiro yebasa rake inoratidzika pamusoro papasi rinoonekera. Hazvigoneke kuti murume wese ave muporesi, asi kana mumwe pakati pevakawanda akafunga kuti aive neakazvimirira uye osarudza kuti angave anoda kurapa basa rehupenyu hwake, saka murume akadaro angaita basa rake nemusoro. Inenge zviitiko zvese zvakadaro aizoona kuti mari yake yaisamubvumidza kuti apedze nguva yake yose pakurapa kunze kwekunge awana mari. Kana akagamuchira mari yemhando aisamubvuma. Aizokundikana pabvunzo yekutanga. Kana akaramba mari uye akangoshandisa nguva yakadai kupora sekubvumirwa nemamiriro ake, saka kana aive nehunyanzvi hwepanyama uye nemabasa ake pasirese uye kumhuri yake zvaisadzivirira, aizoona chinzvimbo chake muhupenyu kuve chiri kuchinja zvishoma nezvishoma. Nekuenderera mberi kuda kushandisa nguva yake zvishoma nezvishoma kushandira vanhu, mamiriro ake uye hukama hwevanhu zvaizoramba zvichichinja kusvikira azviona ari munzvimbo yakadai, mune zvemari uye neimwe nzira, sekutendera kwake kupa nguva yake yese kubasa rake. Asi, zvechokwadi, dai aive nemafungiro mupfungwa dzake kuti zvisikwa zvaive zvakadaro kumuriritira, iye zano chairo raizomukanganisa pabasa rake. iye ruzivo runofanira kukura zvishoma nezvishoma nekusimudzira kwake. Izvi ndizvo zvechokwadi, izvo zvinogona kuvonekwa muhupenyu hwevakawanda vevashumiri vezvisikwa. Asi kuti uone mafambiro ezvisikwa mukukudziridza chokwadi, munhu anofanira kukwanisa kushanda nechisikigo uye nekutarisisa mashandiro ake pazasi pezvinhu.
Ndizvo zvechiKristu nemafungiro masayendisiti asingaiti zvakanaka kana akashandisa kurapwa uko vanachiremba vanokundikana?
Iye anotarisa pamhedzisiro yemhedzisiro pasina kuziva nheyo inosanganisirwa angangozviti, hongu. Asi isu tinoti, kwete! Nekuti hakuna munhu anogona kuita chakanaka chisingagumi pasina mhedzisiro yakaipa kana nzvimbo yake isiriyo uye kana asingazive musimbisirwo unobatanidzwa. Kunze kwemubvunzo wemari, murapi wepfungwa kana mumwe murapi anenge angango tangisa mabasa ake nenzvimbo dzisina kunaka, uye asingazive musimboti wekuita kwake kwepfungwa. Chokwadi chekuti vanorapa zvimwe zvirwere chinoratidza kuti hapana chavanoziva chekushanda kwepfungwa, uye zvichiratidza kuti havana kukodzera kushandisa zita re "sainzi" ravanoti. Kana ivo vaigona kuratidza kuti vanoziva mashandiro anoita pfungwa pamwe nezvezvimwe zvikonzero ivo vanokwanisa kuve nepfungwa kubata vamwe, kunyangwe vangave vasina hunhu.
Ndezvipi zvinongoratidzirwa isu semafungiro epfungwa musayendisiti mupfungwa anofanirwa kuva nazvo?
Kuti uve anokwanisa kubata vamwe mupfungwa zvinofanirwa kuti iye azvimise dambudziko kana kuti ave nedambudziko rakamupihwa raanogadzirisa. Anofanira kugona ipapo kuona kwake kushanda kwepfungwa mumafungiro ekufunga panguva yekugadzirisa dambudziko uye kwete kungoona mafambiro epfungwa aya zvakajeka sekufamba kweshiri yakazara mudenga, kana kupenda kweyevhani inoitwa nemhizha. , kana kugadzirwa kwechirongwa nemugadziri, asi iye anofanirawo kunzwisisa maitiro ake epfungwa kunyangwe iye ainzwa nekuziva manzwiro eshiri uye chikonzero chekubhururuka kwayo, uye kunzwa manzwiro eayo muimbi uye azive mafambiro mufananidzo wake, uye uteedzere pfungwa yemugadziri uye uzive chinangwa chechimiro chake. Kana achikwanisa kuita izvi, pfungwa dzake dzinokwanisa kuita salutary nepfungwa dzeumwe. Asi pane chokwadi ichi: Kana achigona kuita izvi haamboedze kuporesa nepfungwa nezvirwere zvemuviri zvine zvikonzero zvemuviri, kana kuzomboedza kurapa hutano ne "kurapa pfungwa dzemumwe," nechikonzero chekuti hapana mumwe anogona kuporesa pfungwa dzemumwe. Pfungwa dzega dzega dzinofanirwa kuve dzayo chiremba kana dzichinge dzichiita kurapwa kwepfungwa. Zvese zvaangakwanise kuita kuve kujekesa chokwadi chechimiro cheurwere kuenda mundangariro cheimwe, uye kuratidza mavambo evarwere uye nemabatirwo aungaitwa kurapa kwacho. Izvi zvinogona kuitwa neshoko remuromo uye hazvidi kurapwa kwepfungwa kana zvisinganzwisisike zvekunyepedzera. Asi kana chokwadi chikaonekwa chinorova pamidzi yeViri Mental neChristian Science nekuti chinopokana nemifungo yevaviri.
Nenzira ipi iyo kukwanisa kutevera mumwe wega kana imwe yekushanda kwepfungwa, uye kuona zvechokwadi zvinokonzera, kuratidzira zvirevo zvepfungwa uye christian masayendisiti?
Zvinotaurwa zveese marudzi e "masayendisiti" muchimiro chekuramba uye kusimbiswa. Kutora chinzvimbo chevadzidzisi nevarapi vanopomhodza vanosimbisira kugona kwavo kudzidzisa zvakavanzika zvepasirese zvepfungwa sesainzi. Vanosimbisa kusavapo kwechinhu uye hukuru hwepfungwa, kana ivo vanoramba huvepo hwakaipa, chirwere uye rufu. Asi vanozvimisikidza sevatungamiriri munyika yefizikisi kuratidza kuti nyaya haipo, kuti hapana chakaipa, uye hapana chirwere, hapana rufu, chirwere icho chikanganiso, rufu inhema. Asi pasina kuvapo kwenyaya, chirwere uye kukanganisa, vaisakwanisa kurarama sezvavanoita nekutambira mari yekurapa chirwere icho chisipo, zvakare havagone kumisikidza zvinodhura machechi nezvikoro kudzidzisa kusavapo kwechirwere, nyaya uye zvakaipa. Iro zita resainzi, iro masainzi akawana uye akashandisa kumitemo inosimbiswa mumamiriro ezvinhu akafanorongerwa, ivo vanotora, uye vobva varamba iyi mitemo. Kuzvinyengera ivo pachavo, ivo vanonyengedza vamwe, uye saka ivo vanogara munyika yekunyepedzera, yakagadzirwa ivo pachavo. Iko kugona kwekuona kwepfungwa kushanda, disillusions pfungwa kubva fancy nekuti inoratidza kunobva kwemuviri mhedzisiro kubva kwepfungwa zvinokonzeresa, sekuita kweruvengo, kutya, kutsamwa, kana kuchiva. Iko kugona kuona kushanda kweimwe pfungwa yako kunounzawo pamwe nehunyanzvi hwekuongorora muviri wemunhu sechinhu parutivi rwepfungwa, uye zvese izvi zvinoratidzira chokwadi pane imwe ndege yekuita uye chiitiko chepfungwa pane chero ndege. Pfungwa dzakakwenenzverwa hadzingambofi dzakabvuma zvinotaurwa nesainzi epfungwa kana echikristu nekuti izvo zvataurwa zvichazivikanwa zvisiri izvo, uye kana mumwe wavo "masayendisiti" achikwanisa kuona chokwadi mundege imwe neimwe haakwanise kuramba " sainzi ”uye panguva imwe chete ona chokwadi.
Ndezvipi zvakaguma zvekugamuchirwa uye tsika dze dzidziso dzechiKristu kana masayendisiti mupfungwa?
Mhedzisiro yacho, kwenguva yakati, inoita senge inobatsira kwazvo muzviitiko zvakawanda nekuti fungidziro yakagadzirwa inyowani uye kurarama kwehunyengeri kunogona kugara kwenguva uye kwenguva chete. Asi panofanirwa kuuya maitiro kubva mukunyepedzera kwese, izvo zvinounza pamwe nezvakaipa njodzi. Iko kudzidzisa uye kuita kwedzidziso dzadzo kuri pakati pemhosva dzakanyanya kutyisa uye dzinosvika kure nekumanikidza vanhu sezvo zvichimanikidza pfungwa kuramba chokwadi sezvo chiripo pane chero ndege. Pfungwa dzakabatwa zvakadaro dzinoitwa dzisingakwanise kusiyanisa chokwadi kubva mukunyepedzera, uye nekudaro isingakwanisike kuti inzwisise chokwadi pane chero ndege. Pfungwa dzinova dzisina kunaka, dzisina chokwadi, uye dzichiramba kana kusimbisa chero zvayakadanirwa uye shanduko yayo ikasungwa, inogona kunge iri kukuvara.
Nei varapi vepfungwa vakawanda vakabudirira kana vakasarapa, uye kana zvisiri izvo zvavaizvimiririra o, varwere vavo havazowana chokwadi?
Vaporesi vese havasi vekunyepedzera. Vamwe vacho vanotenda kuti vari kuita zvakanaka, kunyangwe hazvo vangasanyatsoongorora zvakanyanya muzvinangwa zvavo. Anobudirira murapi wepfungwa anobudirira nekuti akazvinananidza kwaari uye kuva mushandiri weMweya mukuru wepasi, uye Earth Earth anomupa mubayiro. Kuti vanoita basa rinoporesa hapana anoziva nezvavo kana basa ravo vangaramba. Asi nzira nemaitiro ayo marapirwo anoitwa, varapi pachavo havazivi. Muporesi aisazotarisirwa kuti azvimiririre muchiedza chisina kunaka kumurwere, asi varwere vese havaone murapi muchiedza chaangaita kuti vamuone. Dai isu takatenda vamwe varwere vakapihwa varapi, izvi zvinowoneka mune isina kunaka mwenje. Mumwe wemibvunzo unomuka pakurapa kwevarwere, ndewekuti murapi asina kujairika angangodei kumurwere wake kana murwere anga ari pasi pehutongi hwepfungwa kana kuti zvakaringana achibatirana mazano ake. Izvo hazvingave zvinokatyamadza kuziva kuti kune varapi vasinavimbika mune vepfungwa basa, sezvo kune mune chero kutengesa kana basa. Mukana nemuyedzo unopihwa murume asina kudzivirirwa wakakura, nekuti nekufunga kwepfungwa kana kuzvidzora chinhu chiri nyore kubata pfungwa yemurwere ane rupo uye nekutenda kuomerera pakugamuchirwa kweiye murapi mari yakakura kana chipo, kunyanya kana pa-tient anotenda kuti akabatsirwa.
Ko Jesu nevakawanda vevatsvene havana kurapa zvirwere zvepanyama nemaitiro ekufunga uye kana zvakadaro zvakanga zvisina kururama here?
Zvinonzi, uye tinotenda kuti zvinokwanisika uye ndezvechokwadi, kuti Jesu nevatsvene vazhinji vakaporesa hutano hwenyama nenzira dzepfungwa uye isu hatina kuzeza kutaura kuti zvaive zvisina mhosva, kana vaiziva zvavaiita. Kuti Jesu aiziva zvaari kuita mukurapa kurapwa hatina kukahadzika, uye vazhinji vevatsvene vaive zvakare neruzivo rwakawanda uye nekuda kukuru kwakanaka kuvanhu, asi Jesu nevatsvene havana kuwana mari yekurapa kwavo. Kana mubvunzo uyu waunzwa nevaya vanofarira basa revarapi havangomire kufunga nezve chokwadi ichi. Kusiyana kwakadii naJesu uye zvisingaite zvinoita sezvingave Jesu kana vadzidzi vake kana chero wevatsvene kuroja zvakadaro kushanya kune wese murwere, kurapa kana kusarapa, kana kubhadharisa kubva pamashanu kusvika kumusoro kwemadhora zana chidzidzo, mumakirasi , kudzidzisa vadzidzi nzira yekuporesa. Nekuti Jesu akaporesa vazhinji varwere haisi rezinesi rekuti azviise mubhizinesi rekuporesa kwepfungwa. Chero ani zvake anoda kurarama hupenyu hwakafanana nehwaJesu sezvaanogona, achava nekodzero yekuporesa, asi achaporesa nerudo kune vamwe vake, uye haambove nekugamuchira mubairo. Jesu akaporesa nezivo. Paakati "Zvivi zvako wazviregererwe," zvaingoreva kuti mutambudzi wacho akabhadhara mubairo wechikanganiso chake. Kuziva izvi Jesu akashandisa kuziva kwake uye simba rake kumusunungura kubva mukuwedzera kutambudzika, nekudaro achishanda mukuwirirana kwete kutarisana nemutemo. Jesu, kana chero ani zvake ane ruzivo, aisazotambudza munhu wese akauya kwaari, asi avo chete vaaigona kuporesa mukati memutemo. Iye, iye amene, haana kuuya pasi pemutemo. Iye aive pamusoro pemutemo; uye ari pamusoro payo aigona kuona vese vaiuya pasi pemutemo uye achitambura nawo. Aigona kudzoreredza chirwere chemuviri, chetsika, kana chepfungwa. Mhosva dzehutsika dzakaporeswa naye pavakanga vatsungirira kutambudzika kuri kuita kuti vaone kutadza kwavo, uye kana vakanyatsoda kuita zvirinani. Avo vane hosha dzakabva kune chikonzero chepfungwa vaigona kurapwa chete kana zvido zvehunhu zvichiteedzerwa, kana hunhu hwavo hwachinja, uye pavaive nechido chekuita mabasa avo uye nekuita mabasa avo. Kana vakadaro vauya kuna Jesu akashandisa kuziva kwake uye simba rake kuvasunungura kubva mukuwedzera kutambudzika nekuti ivo vaive vabhadhara chikwereti kuchisikwa, vatendeuka pakukanganisa kwavo, uye mune yavo yemukati mireza vakafunga kutora nekuita kwavo mabasa. Pashure pokuvarapa aiti: “Enda, uye usatadza.”
Kana zvakaipa kuti utore mari yekurapa zvakaipa panyama nemaitiro epfungwa, kana kupa 'dzidziso yesainzi,' hazvina mhosva here kuti mudzidzisi wechikoro awane mari yekuraira vadzidzi mune chero rimwe remapazi ekudzidza?
Iko kushoma kushoma kunofanira kuitwa pakati pemudzidzisi kana muporesi wepfungwa kana weChristian Science uye mudzidzisi muzvikoro zvekufunda. Iyo chete poindi iyo ivo vakafanana ndeyekuti dzidziso yevaviri ine chekuita nepfungwa dzevarwere vavo kana vadzidzi. Kana zvisina kudaro vakasiyana mune zvavanotaura, chinangwa, matanho, uye mune zvabuda. Iyo yechikoro yezvikoro inodzidza kuti zviverengero zvine mamwe maitiro; kuti kuwanda kweimwe nhamba kunogara kune mhedzisiro yakafanana, uye kamwe, mumamiriro ezvinhu chero api zvawo mudzidzisi anoudza mudzidzi kuti katatu anokwana mana kana maviri, kana kuti kaviri mumwe anoita gumi nemaviri. Kana mudzidzi akangodzidzira kuwanda anokwanisa kugara achiratidza chokwadi kana kunyepa kwechirevo chemumwe mukuwanda kwehuwandu. Hapana mhaka iyo murapi anokwanisa kuraira murwere-wake chero chinhu chakadai. Nyanzvi yacho inodzidza girama uye masvomhu nekuda kwechinangwa uye nyore kwegadziriro chaiyo uye kutaura kuri nyore kwemifungo yake kune vamwe vakangwara. Muporesi wepfungwa kana saChristian Scientist haadzidzisi mudzidzi wake nemitemo kana semuenzaniso kuratidza kana kuramba zvinotaurwa nevamwe, kana kuronga pfungwa dzake nekuzvitaura nenzira isinganzwisisike kune vamwe vasiri vekutenda kwake, kana kubvumira zvitendero zvake uye zvirevo kuti dzimire pazvikwereti zvavo pane izvo zvavanokoshesa. Izvo zvikoro zvekufunda zviripo nechinangwa chekugonesa mudzidzi kuti anzwisise chokwadi chendiza yaanogara, kuve anoshanda, uye munhu akangwara munharaunda. "Musayendisiti" muporesi haaratidze kana kuratidza zvinotaurwa nemumwe "musayendisiti" nemaitiro ake, kana mudzidzi weanoporesa haaratidze chokwadi chezvinoreva zvake kana zveumwe mudzidzisi aine huwandu hwejekerere; asi mudzidzi wezvikoro anogona uye anoratidza icho chaanodzidza kuti ichokwadi kana kuti manyepo. Mudzidzisi wezvikoro haanyepedzere kudzidzisa kurapa kwezvirwere zvepamoyo nenzira dzepfungwa, asi "musayendisiti" anodaro, uye saka haana mukirasi imwe chete nemudzidzisi muzvikoro. Mudzidzisi muzvikoro anodzidzisa pfungwa yemudzidzi wake kuti anzwisise zvinhu zvinoonekwa kumanzwi, uye anogamuchira mubhadharo wake mumari uri muuchapupu kumanzwiro; asi nyanzvi yepamoyo kana yeChristianist inodzidzisa pfungwa yemurwere wake-mudzidzi kupokana, kuramba, uye kuramba zvinhu zvinoonekwa nemanzwiro, uye panguva imwecheteyo anobhadhara muripo wake mumari, uye zvinoenderana neufakazi hwekunzwa. Zvekuti zvinoita sekuti hapana chakaipa mudzidzisi wechikoro anotambira mari sekubhadhara kwemabasa ake zvichienderana nendege yaanogara uye kudzidzisa; nepo zvisiri izvo kuti musayendisiti wepfungwa kana wechikristu musayendisiti ataure kuti anoporesa kana kudzidzisa zvinopesana neufakazi hwepfungwa, uye panguva imwecheteyo tora kana kubhadhara chaicho zvichienderana nemanzwiro aanoramba, asi izvo zvaari anofarira. Asi ngatiti pane chakaipa kuti mudzidzisi wezvikoro awane mari yemabasa ake.